တာချီလိတ်မြို့ မိုင်းဖုန်း(က)ကျေးရွာအုပ်စုတွင် သတ်ခံထားရသည့် အမျိုးသမီးအလောင်းတွေ့ရှိ ~ RANGON NEWS DAILY
လှည်းတန်း ဘူတာ အနီးမှာနားကြပ်တပ်ပြီးရထားလမ်း အတိုင...
တာချီလိတ်မြို့ မိုင်းဖုန်း(က)ကျေးရွာအုပ်စုတွင် သတ်...
ဘုန်းကြီးပျံ ဇာတ်ပွဲခင်းအနီး သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား...
မင်္ဂလာဈေး အမြန် ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးရေး ဈေးသူဈေးသ...
"နာဆာမှ မြန်မာလူမျိုးသိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာပဒေသာတင်"...
ခိုးရာလိုက်ပြေးသည့် ၁၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဥ...
အရှေ့မြောက်ဒေသ တိုက်ပွဲကြောင့် တရုတ်ဘက် လူထောင်ချီ...
တာချီလိတ်မြို့ မိုင်းဖုန်း(က)ကျေးရွာအုပ်စုတွင် သတ်ခံထားရသည့် အမျိုးသမီးအလောင်းတွေ့ရှိ
9:55 AM KhinMaung Latt No comments
RangonNewsDaily::Tuesday. March 7. 2017
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့နယ် မိုင်းဖုန်း(က)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်တုံကျေးရွာနှင့် ဟိုနား (အာခါ) ကျေးရွာကြားတွင် မတ်လ (၇) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁)နာရီခွဲခန့်က အမျိုးသမီးအလောင်း တစ်လောင်းတွေ့ရှိသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ နေရာတွင် အမျိုးသမီး အလောင်းတွေ့ရကြောင်း သတင်းအရ ဝမ်တုံကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး အဖွဲ့ဝင် ဦးအိုက်ဖုန်းက ဝမ်ပုံနယ်မြေရဲစခန်းသို့ အကြောင်းကြားသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် နေ့လယ် (၁)နာရီ (၄၅)မိနစ်ခန့်က အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိ စစ်ဆေးကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးနေသည့် အလောင်းမှာ အသက် (၅၃)နှစ်အရွယ် ဒေါ်ပါလူ (ခ) ဒေါ်နန်းလူ ဖြစ်နေပြီး တာချီလိတ်မြို့နယ် ၀မ်ပုံရွာတွင် နေထိုင်ကာ လယ်လုပ်သူဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတွင် ဦးခေါင်း ဖူးရောင် ဒဏ်ရာများ၊ လက်နှင့်ခြေထောက်တွင် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများ၊ နောက်ကျောတွင် ထိုးသွင်း ဒဏ်ရာတို့ဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
အလောင်းအား တာချီလိတ်ခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ရဲဆေးစာနှင့်အတူ ပို့ဆောင်ထားပြီး ဝမ်ပုံနယ်မြေ ရဲစခန်းတွင် သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် (ပ) ၂/၂၀၁၇ ၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by : ကိုလတ် Cool Download Rox | Admin at 9:55 AM